ဘဝမှတ်တိုင်: ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ Network ချိတ်နည်း
အခြေခံ Network ချိတ်နည်းလေးပါ .. ဒီနည်းလမ်းသိရုံလောက်နဲ့ကိုယ်တိုင်ချိတ်ဆက်လို့ ရပါပြီ ..။ အရင်ဆုံး Network မချိတ်ဆက်ခင် ကြိုးကိုက်တာသိဖို့လိုပါတယ် နှစ်မျိုးရှိပါတယ် ကွန်ပျူတာ2လုံးပဲချိတ်မှာလား
အများကြီးချိတ်မှာလားဆိုတာတော့ ရွေးချယ်ပီး ကြိုးကိုက်ပါ..
လုံးဝကိုမလုပ်တတ်တဲ့သူကိုတော့စာနဲ့အသေးစိပ်ရေးပြရတာခက်လို့ကြိုးနဲ့ခေါင်းနဲ့ဝယ်ရင်းအဲဒီဆိုင်မှာပဲလုပ်ခိုင်းလိုက်ပါ ။ ကြိုးအဆင်ပြေမပြေကိုတော့ စမ်းသပ်တဲ့ကိရိယာရှိပါတယ် အဲဒါနဲ့စမ်းသပ်ပါ။
နောက်ပီး မိမိစက်မှာ Network port မပါရင် Network card လိုပါမယ်အားလုံးပြည့်စုံပြီဆိုရင်အောက်ကပုံကိုကြည့်ပါ
Window key + Pause Break (သို့)My computer ကို Right-click လုပ်ပီး Computer name tab ကိုနိုပ်
ပါ။ပီးရင် Change ကိုနိုပ်ပါ အဲဒီမှာ Computer name ကကျန်တဲ့စက်တွေနဲ့မတူအောင်ထားပီး Workgroup name
တော့ Switch မလိုပါဘူး တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကိုချိတ်ဆက်ဖို့ကြိုးပဲလိုပါတယ်2လုံးနှင့်အထက်ချိတ်မယ်ဆိုရင်တော့
Switch လိုပါမယ် အားလုံးပီးပြည့်စုံလို့ချိတ်ဆက်တော့မယ်ဆိုရင် ..
1 ကွန်ပျူတာတွေအားလုံး ကြိုးတွေထိုးပါ
2 ကွန်ပျူတာမှနက်ဝက်ကြိုးအားလုံးနှင့်Switch မှာချိတ်ဆက်ပါ
3 Run box မှာ ncpa.cpl ရိုက်ထဲ့ပီး Enter နိုပ်ပါ အဲမှာ Local area connection ဆိုတာတွေ့ပါမယ်
အဲဒါကကိုယ့်ရဲ့စက်မှာ Network card တစ်ခုရှိရင်တစ်ခုပေါ်မယ် နှစ်ခုရှိရင်နှစ်ခုပေါ်ပါမယ်သိပ်အရေးမကြီးပါဘူး
ကိုယ်သုံးမယ်ကဒ်ကို Right-click နိုပ်ပီး Properties ကိုဝင်ပါပီးရင်အောက်ကပုံကိုကြည့်ပါ..
4 ပီးရင်internet protocol(TCP/IP) ကိုရွေးပါ အောက်မှာ properties ကိုနိုပ်ပါ
5 use the following ip address: ကိုရွေးပီး ip သတ်မှတ်ပေးရပါမယ် စက်တစ်လုံးက 192.168.1.1
ဆိုရင်နောက်စက်ရဲ့ IP မှာ 192.168.1.2 ပေါ့အဲလိုမျိုးပဲ နောက်ထပ်ချိတ်ဆက်ချင်တဲ့စက်တွေကိုလဲနောက်ဆုံးက
ဏန်းပဲပြောင်းပေးလိုက်ပါ ဒါဆို Network ချိတ်ဆက်တာအဆင်ပြေသွားပါပြီ။
စက်အားလုံး Network မိ မမိ စမ်းကြည့်မယ် ping လုပ်ကြည့်ရအောင် ကိုယ့်ရဲ့ Network group ထဲ့မှာ
IP 192.168.1.1ကနေ10 ထိရှိတယ်ဆိုပါစို့ အရင်ဆုံး Run box မှာcmd ရိုက်ပီး Enter နိုပ်ပါ Command prompt
ကျလာရင် ping 192.168.1.1 ဟုရိုက်ပီး Enter နိုပ်ပါ နောက်ပီး ping 192.168.1.2/3/4/5/6/7/8/9
/10 ဆိုပီးစက်တစ်လုံးချင်း ping ကြည့်ပါ အောက်ကပုံကိုကြည့်ပါ reply လာရင်ချိတ်မိပါပီ request time out
ဆိုရင်မချိတ်မိသေးပါ ဒီလောက်ဆို Network ချိတ်ဆက်တာအဆင်ပြေပါပြီ
Credit : http://winhtuttin.blogspot.com
Network ချိတ်နည်း (2)
ကွန်ပျူတာကိုတွေကို ....8 port switch နဲ့ ချိတ်တဲ့နည်းပြောပြပါမယ်..( peer to peer ပါ )
ပထမဆုံး ..RJ 45 ခေါင်းနဲ့ male ခေါင်းတွဲပါတဲ့ နက်ဝပ် cable တွေ နဲ့ switch မှာ ချိတ်ဆက်ထားဘို့ လိုပါတယ်...ပထမဆုံး စက်မှာ ..IP ထည့်ပါမယ်.. ခုပြောပြတဲ့အတိုင်း ထည့်ကြည့်ပါ...my network place > properties> TCP/IP ကို select လုပ် properties ကိုနှိပ်ပါ ..use following IP ဆိုတာမှာ IP address မှာ 15.11.80.1 ပြီးရင် tab ခုန်လိုက်ပါ ..subnetmark ကိုသူ့အတိုင်းရှိပါစေ..default gateway မှာလဲ...15.11.80.1 လို့ရိုက်ထည့်ပါ...အားလုံးကို ok လုပ်ပြီးထွက်..General Tab ကို ပြန်ရောက်ရင်..show icon in notification ဆိုတာကို အမှန်ချစ် လုပ်ပေးခဲ့ပါ..( tray မှာ ကွန်ပျူတာပုံလေးပေါ်လာအောင်ပေါ့) ဒါဆို ပထမ ဆာဗာအထိုင်စက် ပြီးပါပြီ...
.my network place > properties> TCP/IP ကို select လုပ် properties ကိုနှိပ်ပါ ..use following IP ဆိုတာမှာ IP address မှာ 15.11.80.2 ပြီးရင် tab ခုန်လိုက်ပါ ..subnetmark ကိုသူ့အတိုင်းရှိပါစေ..default gateway မှာလဲ...15.11.80.1 လို့ရိုက်ထည့်ပါ...အားလုံးကို ok လုပ်ပြီးထွက်ပါ ...
ဒီလိုဘဲ တစ်လုံးပြီး တစ်လုံး IP address မှာ2.3. 4စသဖြင့် ဆီးရီး ပေးသွားပါ..
အားလုံးပြီးသွားပြီ ဆိုရင်တော့ ...စက်အားလုံး ရဲ့ mycomputer > properties > computer name မှာ အမည်တွေပေးပါ...အောက်မှာရှိတဲ့ workgroup ဆိုတာမှာ ..စက်အားလုံးကို Group name တစ်ခုထဲ တူညီစွာပေးထားပါ...
စက်အားလုံးကိုရီစတပ်ချလိုက်ပါ ...ဒါဆိုရင် .. စက်အားလုံးချိတ်လို့ပြီးနေပါပြီ...
တစ်လုံးက တစ်လုံးကို ခေါ်ချင်ရင် .. run box မှာ ..\_\_ 15.11.80.2\_ .enter ခေါက်လိုက်ရင် .. IP no2စက်ကို ခေါ်လို့ ရပါပြီ...နဲနဲလေးစောင့်ပြီးမကြာခင်မှာတက်လာမှာပါ
Credit : http://battalion-byn.blogspot.com
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 1/24/2014 08:37:00 pm